Ahoana no tokony hivarotana an-tserasera | Martech Zone
Ahoana no fomba hivarotana an-tserasera
Alatsinainy Janoary 14, 2013 Alakamisy, Jona 18, 2015 Andrew Davis
Ny fisafidianana ny toerana hivarotana ny entanao an-tserasera dia mety ho toy ny fividianana ny fiara voalohany. Miankina amin'ny zavatra tadiavinao ny safidinao, ary mety hihoatra ny lisitry ny safidy. Ny tranokala ecommerce eo an-toerana dia manome fotoana ahafahana miditra amina tambajotra mpanjifa tena malalaka saingy maka tombony lehibe kokoa izy ireo. Raha te hivarotra haingana ianao ary tsy manahy momba ny sisin-tany, dia izy ireo no mety indrindra.
Ny tranonkala ecommerce dia manaraka, manome avy amin'ny rindrambaiko boaty ho toy ny sehatra serivisy izay misy fampidirana tena matanjaka - maro miaraka amin'ny fampidirana karama sy tsindry ary marketing amin'ny mailaka. Raha mila fanaraha-maso bebe kokoa amin'ny hafainganana ianao, ny fahafaha-manao ary ny fanaingoana, ny fampiantranoana ny tranokala ecommerce anao no mety ho valiny. Ary raha maniry hanangana anao ianao, dia voa fotsiny.
Ity misy sary mahafinaritra sy mahafinaritra izay mijery ireo fomba maro samihafa amin'ny fivarotana amin'ny tranonkala an-tserasera ankehitriny.
Source:Blog tetika CPC
Tags: ecommercemivarotra an-tserasera
Andrew dia talen'ny Marketing an'ny CPC Strategy. Tamin'ny faran'ny volana septambra 2010 dia vita ny nanoratan'i Andrew ny Merchant Comparison Shopping Handbook izay manome topy maso feno momba ny fomba hanombohana sy hitantanana fampielezana varotra fampitahana mahomby. Androany i Andrew dia nandany ny ankamaroan'ny fotoanany tamin'ny fanovozana hevitra amin'ny mpaninjara antonony sy lehibe an-tserasera ary ireo masoivohon'ny varotra an-tserasera, ary koa manoratra sy mitarika ny Blog tetika CPC.
Sehatra marobe ao amin'ny firaketana SPF anao
Manampia Ikon-trano ao amin'ny Menu Navigation WordPress
Jan 15, 2013 ao amin'ny 7: 59 AM
Ahoana no mety tsy nahitanao an'i "Olx" amin'ity sary ity: /
Jan 15, 2013 ao amin'ny 9: 58 AM
Nandany fotoana be aho nandalovana ny tabilao misy an'ity infographic ity. Hitako fa tena mahatsikaiky ary, raha ny tena izy, tena teo amin'ny toerana - tena. Ilay olona nanamboatra an'ity infographic ity dia tena manana fahalalana momba ny fomba hivarotana zavatra amin'ny Internet.